Matte Black 4 Inch ụlọ ịsa ahụ Centerset
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ / WOWOW Centerset Bathroom Foset With Drain Assembly Matte Black
WOWOW Centerset Bathroom Faucet with Drain Assembly Matte Black
gosiri 4.85 nke 5 dabeere na 20 ahịa Fim
(20 ahịa reviews)
Lọ ịsa ahụ faucet matte ojii 2 ejiri aka na-enye arụmọrụ yana ihe eji eme ihe ugbu a na 1. Site na akwụkwọ ikike afọ 3. Shoplọ ahịa anyị ime ụlọ ịwụ ahụ fapeeti matte ojii 2 ejiri aka ugbu a!
Ntụziaka nwụnye 2321400B
Akwụkwọ mposi jidere Wall nọkwasịrị n’ịnyịnya Black
WOWOW Now Towel Ring Matte Black
Ime ụlọ ịwụ ahụ faucet matte ojii 2 akaUm 2321400B
Dị ka ọtụtụ ndị na-ahọrọ ọlaọcha ma ọ bụ chrome foset, ị nwere ike ịme nkwupụta ejiji buru ibu site na pọpụlị ime ụlọ ịsa ahụ na-acha uhie uhie. Ọ bụghị naanị na agba a na-enye ime ụlọ ịwụ ahụ ihe ngosi mara mma na nke na-enweghị atụ, agba agba ojii matte ka dịkwa aghụghọ na kpochapụwo. Ọ bụghị nke a na-eme nke ọma na nwa ojii abụrụla nke agba agba ugbu a mgbe ọ bịara n’ihe gbasara ime ụlọ ịwụ. Matte ojii bụ omume nke na-agaghị afụ ngwa ngwa ma ọlị. Ihe nkpuchi matt ojii nke ọkpọ mmiri ịsa ahụ nwere ike inye ụlọ ịsa ahụ ọgbara ọhụrụ aka.
Otu nwere ike ileda eziokwu ahụ bụ na ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa na ụlọ ịsa ahụ ọ bụla gbasara ụdị. Ọ bụ ezie na ọkpọkọ ime ụlọ ịsa ahụ pere mpe, ndị mmadụ na-elekwasị anya na ọkpọkọ ime ụlọ ịwụ ahụ ka anya ha na-adọrọ mmasị na isi ihe ndị a. Ya mere ọkpọkọ ime ụlọ ịwụ nwere ike ịme ma ọ bụ mebie ụlọ ịsa ahụ ọ bụla. Ime ụlọ ịsa ahụ nwere ikike ịkwalite ụlọ ịsa ahụ. Bathroomlọ ịsa ahụ dị mfe ma ọ bụ nke pere mpe nwere ike ịnweta nnukwu mbuli elu na pọpụlị ịsa ahụ mara mma. Dị ejiji mara mma nke ụlọ ịsa ahụ a WOWOW na-eme ka ụlọ ịsa ahụ gị dịkwuo mma n'otu oge. Ime ụlọ ịwụ ahụ mattị ojii 2 ejiri nke WOWOW bụ otu n'ime ihe eji eme ụlọ ịsa ahụ nwere ike ịgbanwe ọmarịcha ime ụlọ ịwụ gị.
Matte nwa ụlọ ịwụ ahụ na-eji aka ojii ejiri aka 2 mee ya
Style bụ otu ihe, mana arụmọrụ nwere ike bụrụ ihe dị mkpa karị. Na ntọala kwa ụbọchị ị na-eji ụlọ ịsa ahụ gị ọtụtụ ugboro ma ịchọrọ ime ụlọ ịwụ ahụ ka ijere gị ozi n'ụzọ na-akwado usoro ị na-eme kwa ụbọchị. Nke ahụ na-agụta n’enweghị mgbagha ọ bụla maka ọrụ dị ka igwe ịsa ahụ na ebe ịsa ahụ. Ma eleghị anya, ị ga-eji ụlọ ịsa ahụ gụọ mposi karịa atụmatụ ndị ọzọ nke ime ụlọ ịwụ ahụ. Ọ bụ ya mere ị ga-eji tinyekwuo uche na akụkụ a nke ime ụlọ ịwụ ahụ. E wezụga ụlọ ịsa ahụ dị mma, ọkpọka ụlọ ịsa ahụ na-esetịpụrụ arụmọrụ niile ịchọrọ.
Ime ụlọ ịwụ ahụ mattị ojii 2 ejiri nke WOWOW na-ekwe nkwa nnukwu ahụmịhe mmiri. Nke a matte nwa 4 inch ụlọ ịwụ foset nwere 2 ịlesụ. Ndị a ị youụ ị nwere ike ịgbanwe mmiri okpomọkụ na ọsọ steplessly gị mkpa. Ngwurugwu dị elu na-enye gị ohere zuru oke n'etiti ebe a na-asa ahụ na ebe ịsa ahụ iji jiri aka gị saa aka gị ma ọ bụ kpochapụ ihu gị. Ebe dị anya bụ sentimita 4.4 ma nye ohere zuru oke. N'ihi ya, ịkwesighi ịlụ ọgụ na oghere dị oke dị ka obere ụlọ ịsa ahụ dị ala.
Karịsịa, ntụgharị a na-atụgharị anya nke ụlọ ịsa ahụ na-acha ọcha nke ime ụlọ ịwụ 2 nke WOWOW na-enye ntụgharị ntụgharị 360 maka adaba iji. Ime ụlọ ịwụ ahụ mattị ojii 2 ejiri na-abịa na a inwego mkpanaka igbapu ke otu matte nwa agba na-etolite otu ịdị n'otu gị ụlọ ịwụ sink. Ọ dị nro dị mfe imeghe ma mechie nzukọ drain a na njikwa aka na azụ nke ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ.
Uclọ mmiri akpa ụlọ ịsa ahụ mbụ matte ojii 2 ejiri aka
E wezụga atụmatụ ya nke oge a na nke obi ike, WOWOW bụkarị onye amaara maka ụkpụrụ ya dị elu. Dị ka ọ na-akpali ụkpụrụ ndị a dị mma site na eserese eserese n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe ha nke oge a, obere nkọwa ọ bụla nke pọmpụ ụlọ ịsa ahụ kachasị nke kachasị mma. Nke ahụ na-enye gị nnukwu ụlọ ịsa ahụ dị elu nke ga-emezu nzube ya nke ọma ma mee ka ntachi obi dị ogologo ndụ.
Durakwụ a na-adịgide adịgide nke WOWOW's bathucet matte black 2 ejiri mee nke ọla kọpa siri ike n'ihi na nke a na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ kachasị mma na ntachi obi kachasị ogologo. Ọzọkwa na-ewu ka nke siri ike ọla kọpa na okokụre na zinc alloy. Adịghị mkpa ka nchegbu banyere corrosion mbipụta n'ihi na nke ndị a ihe. E wezụga nke a, ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ a na-enweghị ndu iji kpuchido ezinụlọ gị nke kachasị. Na-ahụ ihe dị iche nke àgwà a ozugbo ị jidere ya. Blacklọ mmiri ịsa ahụ a na-acha uhie uhie na-acha ọcha 2 na-eguzogide ọgwụ. Ya mere, ọ dị mfe ilekọta. Nke ahụ bụ ihe ị nwetara mgbe ịzụrụ ọkpọka ụlọ ịsa ahụ dị elu.
Akụ na ụba ụlọ ịwụ ahụ faucet matte ojii 2 ejiri aka
Onu ogugu nke seramiiki n'ime ime ulo eji aru ulo a na-acha uhie uhie na-eme ka mmiri na-aga nke oma. Mpempe mmiri nke ime ụlọ ịwụ ahụ nwere ABS aerator. Site na ihe ọhụụ a, ị ga - echekwa mmiri ị na - a andụ ma nyere aka chekwaa mmiri. Ngwunye a nke NSF kwadoro nwere iji nye gị nkasi obi kachasị. A nwalere katrij dị elu dị na 500,000 cycles, ma ka na-arụ ọrụ kacha mma. Ma na nke a na onu ahia onu ahia!
Dika imeputa ihe nke WOWOW bu ihe eji emezi ihe na akpaghị aka, WOWOW nwere ike inye ulo a kachasi nma ime ulo oru ime ulo oru nwayo abuo abuo aka na onu ahia. Tinyere ị nweta ihe na ịrụ ọrụ nke ọma ma na-efu uru, WOWOW na-echekwa ọnụ ahịa na ọnụahịa mmepụta. Ma na-enweghị adịkwa ebumnobi bụ isi nke na-amị elu mma ngwaahịa nke n'anya. WOWOW na-ekwe nkwa na ị gaghị achọta pọpụt ọ bụla nke otu ụlọ ịwụ ahụ nke nwere otu ụdị dị ala karịa ka anyị na-enye.
Ọ dị mfe ịwụnye ma dị mfe ilekọta
Matlọ mmiri a na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-eji aka 2 ejiri ihe dị mfe iji wụnye onwe gị n'enweghị ọkachamara ọ bụla. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịchekwa ọzọ site na ịwụnye ụlọ ịsa ahụ a na-asa ahụ matte black 2 ejiri onwe gị. Ogwe ụlọ ịsa ahụ nke 4 nke anụ ọhịa na-adaba na ugwu 3 ọ bụla. Ime ụlọ ịwụ ahụ mattị ojii 2 ejiri na-abịa na a set nke ngwa na-eme ka wụnye a mpempe achicha, gụnyere a mmiri tube, a inwego mkpanaka igbapu na a oche efere maka mfe-wụnye.
Na ime ụlọ ịwụ ahụ mattị ojii 2 ejiri nke WOW ị ga-ahụ na mmiri nke ime ụlọ ịwụ nke karịrị ụkpụrụ ụlọ ọrụ niile. You ga-enwe ike ilekọta ụlọ ịsa ahụ a ngwa ngwa, ebe ị nwere ike wepu mmiri fọdụrụ site na iji mkpịsị aka gị aka dị nro. Dị ka ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ a dị mfe nhicha, ịnwere ike iji mmiri a rụọ ọrụ ogologo oge, na-ekwe nkwa ụkpụrụ mmiri dị elu. WOW abụghị maka ihe ọ bụla na-enye oge ikike nke afọ 3 iji kwe nkwa ịrụ ọrụ nke ụlọ ịsa ahụ na-acha uhie uhie matte ojii 2.
Uru nke ime ụlọ ịwụ ahụ matte black 2 ejiri aka na obere oge:
Design Na-eji oji di iche na-acha ocha nke ejiji
Akwa focet dị elu iji nye ohere sara mbara
Spo Ezigbo mkpọtụ na mmiri adịghị
Performance Nrụ ọrụ dị elu
SKU: 2321400B Categories: Ime ụlọ ịsa ahụ, Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ Tags: igbapu nzuko, abuo, arịa nsị mmiri
6 x 2.2 x 7.5 sentimita
4.4 sentimita asatọ
5.2 sentimita asatọ
Aka ekpe & aka nri
Welite Rod Drain
Kpamkpam H this a fom. Nwere ike ghara iti a price na àgwà bụ kediegwu.
Enwere m mmasị n'ile anya nke ọkpọkọ mmiri a. Mee nnukwu ọdịiche na ụlọ ịsa ahụ. Ọnụahịa dị oke ọnụ.
Mara mma taps. Sie ha ike. Nnukwu uru
Ezigbo obi ụtọ na ngwaahịa a- emeela ya nke ọma ma dịkwa mfe ịwụnye. Ntuziaka bụ agụụ-na-atụ, ihe niile ịchọrọ (mwepụ wrenches) na-abịa na ngwugwu ahụ, ngwaahịa ikpeazụ ahụ dịkwa oke mma! M hụrụ n'anya otú spout si ekwupụta!
Na-adị oke mma, na-arụ ọrụ dị ukwuu. Ga-enweta ọzọ.
Nnọọ sleek mfe iji wụnye. N'anya nke na faufuli na-ejuputa
M nyere iwu ka nke a wee nweta ụlọ ịsa ahụ a na-asa ahụ n'anyasị nke arụnyere n'ime ọkara elekere nke ọma. Daalụ.
mara mma na-achọ na ezigbo ego plumber kwuru na ọ bụ ọmarịcha mgbata na ezigbo mma maka ọnụahịa ahụ
Onye ọrụ m kwuru na ọkpọkọ ọkpọ abụọ a dị mfe ịwụnye. Nrụgide mmiri dị ezigbo mma, ọkachasị mmiri ọkụ. Ọ masịrị m na spout swivels na m nwere ike ugbu a jupụta ihe n'ime ime ụlọ ịwụ na agaghị aga m elu aak kichin foset.
Mfe iji wụnye, yiri ka ọ bụ ezigbo mma ma mara ezigbo mma! O yiri ọgaranya ma dakọtara.
Na-amasị m na nke a na-asa ahụ foset abụọ ị veryụ nke ukwuu anya classy ese ọnụ na ọ dị mfe iji wụnye
A pụrụ ịdabere na ya na usoro ọgbara ọhụrụ nke ọkpọkọ mmiri a. Zuru oke dabara na ime ụlọ ịwụ ahụ ụlọ
Nnukwu mmelite na ime ụlọ ịwụ ahụ. Sleek imewe, arụnyere ngwa ngwa na mfe.
Na mbido, esiri m ike (n'ihi enweghị ahụmịhe). Ọkwọ ụgbọ mmiri m nyeere m aka. Ekwenyere m na ọnụahịa ya dị ịtụnanya, ọ dị oke ọnụ ma ogo ya dị mma. Nnọọ aro ịzụta! !
Enwere m onye ọrụ aka wụnye nke m, mana ọ sịrị na ha dị mfe ịwụnye. Ọ gbanwere ụlọ ịsa ahụ m n'otu ntabi anya na ọgbara ọhụrụ m na-aga.
Prefect - nke a athlọ ịsa ahụ foset packaged well and is high quality
Na-arụ ọrụ nke ọma, Foset dị n'oge a anya
Hụ n'anya na arụmọrụ nke ọkpọkọ a. Mmiri mmiri ahụ dị mma! Ọ na-amasị m na ọkpọkọ mmiri nwere ike ịkwaga n'akụkụ akụkụ. Ga-azụta ọzọ!
Mmelite na-ele anya nke ochie na nke toro ogologo na-enye ohere maka mmiri mmiri. Bara nnukwu uru maka ego ahụ!
Nke a foset dị mfe iji wụnye. Mpụta ahụ dịkwa ezigbo mma. Ọnụ ọnụ.
WOWOW Ime ụlọ ịsa ahụ igwekota igwe mmiri na swivel Spout
WOWOW Bathroom Sink Faucet Naa Nickel Wides…